कस्तो पापी आमा ! बाबा म*रेको हप्ता दिन बित्न नपाउदै आमा पोइला गएपछि विप्लबको भयो यो हालत, रुदै मिडियामा – दैनिक नेपाल न्युज
कस्तो पापी आमा ! बाबा म*रेको हप्ता दिन बित्न नपाउदै आमा पोइला गएपछि विप्लबको भयो यो हालत, रुदै मिडियामा
सास रहुन्जेल बाच्ने हरेकलाई आस हुन्छ । नमस्कार म कमल सरगम,रोल्पामा जन्मिएका विप्लब परियारको अवस्था निकै दर्दनाक छ । उनि सानै उमेरमा टुहुरो भए, बाबाको मृ*त्युको खबर सुनेको ७ दिन बित्न नपाउदै एता आमा पनि अर्कै संग पोइला गएपछि बिचल्ली अबस्थामा जीवन कटाएका विप्लब जीवनको अन्तिम प्रहरमा छन ।
उनलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ । ब्लड क्यान्सर भएपछि उनकी फूपुले उपचार गर्न सबै सम्पति बेचिन अहिले न सम्पति छ न त् विप्लब निको नै भए । दैनिक स्कुल जान नपाएका विप्लब राम्रो संग पढ्ने र ठुलो मान्छे बन्ने सपना रहेको बताउछन । सबैलाई रूहाउने कहानी रहेको विप्लबलाइ यो भिडियो हेरेर सबैले सहयोग गरौ…
एकै पटक जन्मिएका ४ छोरा छोरीलाई हेर्नुहोस, आमालाई डेँगु लाग्यो, बुवा भन्छन्-बच्चा फाल्न आँटेका थियौं (भिडियो हेर्नुस)